Raspberry Pi ဖြင့်ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ပိုင် Arcade စက်တစ်ခုဖန်တီးပါ အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ
ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးဘဝတွင်နေထိုင်ရန်လုံလောက်သောကံကောင်းသည့်အချို့ခေါင်းစဉ်များနှင့်ဂိမ်းများကိုကစားနိုင်ခြင်းကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရသူများဖြစ်သည်။ ဒီတစ်ခါလည်းနှင့်ဤအကြောင်းကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ပိုင် Arcade Machine ဖန်တီးရန်တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးကြိုးစားခြင်းသည်အံ့အားသင့်စရာမဟုတ်ပါ ထိုအတိတ်အတွေ့အကြုံများကိုတစ်နည်းနည်းဖြင့်ပြန်လည်ရှင်သန်ရန်။
ဒီအချက်ကိုစိတ်ထဲထားပြီးလုံးဝပရော်ဖက်ရှင်နယ်စက်တစ်လုံးထုတ်လုပ်ဖို့ဝေးနေပြီ၊ ဒီနေ့စျေးကွက်ထဲမှာသင့်ကိုကမ်းလှမ်းထားတဲ့ပစ္စည်းများမြောက်မြားစွာရှိတယ်၊ တစ်နည်းအားဖြင့်၎င်းကိုခေါ်ဖို့၊ ပရိဘောဂများ၊ သော့ခလောက်များများ၊ သင်ထင်ထားတာထက်ပိုမိုရိုးရှင်းသည်။ နှင့်မျက်နှာပြင်နှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲများအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောတပ်ဆင်, ဒီရည်ရွယ်ချက်အတွက်၎င်းကိုအသုံးပြုရန်တိကျသောဖွဲ့စည်းမှုပုံစံရှိသော Raspberry Pi ကိုသာကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်ကြောင်းယနေ့ကျွန်ုပ်ရှင်းပြပါမည်.
2 ကျွန်ုပ်တို့၏ Raspberry Pi တွင် RetroPie ကို download လုပ်၍ တပ်ဆင်သည်
3 RetroPie ကိုသင်၏ Raspberry Pi တွင်တပ်ဆင်ခြင်း
4 Raspberry Pi တွင် RetroPie ကို set up လုပ်ပါ
အလွန်အခြေခံကျသောနည်းဖြင့်မည်သည့်မျက်နှာပြင်တွင်မဆိုကစားရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကွဲပြားခြားနားသောဒြပ်စင်များလိုအပ်လိမ့်မည်။ ၎င်းတို့သည်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်၎င်းတို့မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ကိုဖော်ပြလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်၏ Rasbperry Pi ကို retro console အဖြစ်ပြောင်းလဲလိုလျှင်သင်လိုအပ်သည်မှာ - \_ t
အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုကို LAN (သို့) ဝိုင်ဖိုင်မှတစ်ဆင့်အသုံးပြုနိုင်သည်
ဤအချက်နှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်ချက်တစ်ခုအနေနှင့်သတိပြုသင့်သည်မှာ software အားလုံး install ပြီးသည်နှင့်အရာအားလုံးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်လည်ပတ်နိုင်ပြီဆိုလျှင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောထုတ်ကုန်တစ်ခုဖန်တီးရန်စဉ်းစားနိုင်သည်။ ပိုပြီးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပုံရိပ်ပေးခြင်းဖြင့်ပရိဘောဂများကိုတည်ဆောက်ပါ။ ဈေးကွက်တွင်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိပြီး၎င်းကို၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကီးဘုတ်၊ မျက်နှာပြင်နှင့်ပင်တပ်ဆင်ထားသည်။
သင်၏ Raspberry Pi ကိုဝက်ဘ်ဆာဗာတစ်ခုအဖြစ်ပြုပြင်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ Raspberry Pi တွင် RetroPie ကို download လုပ်၍ တပ်ဆင်သည်
မည်သည့်မျက်နှာပြင်တွင်မဆိုကစားခြင်းကိုပျော်မွေ့နိုင်သည့်အဆုံးစွန်သောရည်မှန်းချက်ကိုအောင်မြင်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ပိုင် Arcade တွင် ၀ င်ရောက်နိုင်သည့်တိုင်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောအလောင်းအစားသည်ဖြစ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Raspberry Pi တွင် RetroPie operating system ကို install လုပ်ပါ။ အခြေခံအားဖြင့်တော့ Raspbian ဗားရှင်းအကြောင်းပြောနေတာပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ဒီဂျစ်တယ်ဂိမ်းများကိုကစားနိုင်သည့်မတူညီသော emulators များဖွင့်ရန်ခွင့်ပြုထားသည့်လုံးဝစိတ်ကြိုက် interface ပါဝင်သည်။
RetroPie သည်ကွဲပြားခြားနားသော configuration ဖြစ်နိုင်ခြေများ၊ interface ၏ fluidity နှင့် open source emulators များအသုံးပြုခြင်းတို့ကြောင့်စျေးကွက်ရှိအခြားရွေးချယ်စရာများနှင့်ကွဲပြားသည်။ စိတ် ၀ င်စားသူမည်သူမဆိုဤဆော့ဖ်ဝဲ၏ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုတွင်ကုဒ်အသစ်နှင့်ရော၊ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအမှားများကိုအစီရင်ခံခြင်းနှင့်ပြင်ဆင်ခြင်းဖြင့်ပါပူးပေါင်းနိုင်သည်။ ၎င်းကိုရပ်ရွာကအချိန်တိုအတွင်းတည့်မတ်ပေးလိမ့်မည်
ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဟာအလွန်အရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်။ ဒါက RetroPie ကသင့်ကိုမတူညီတဲ့ခလုတ်ခုံများကိုတုပရန်ခွင့်ပြုသော်လည်းအမှန်တရားကတော့ Raspberry Pi ပေါ်မူတည်ပြီးအချို့ဂိမ်းများနှင့်အခြားကစားနည်းများကိုကစားနိုင်သည်။ ရှင်းလင်းသောသာဓကတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့သည် Raspberry Pi 1 ကိုဤရည်မှန်းချက်ကိုရည်စူးပါက Play Station 1 သို့မဟုတ် Nintendo 64 ကဲ့သို့သောရွေးစရာများကိုဖွင့ ်၍ မရပါ။ အနည်းဆုံးရွေးစရာနှစ်ခုရှိလျှင် Raspberry Pi ကဲ့သို့ပိုမိုအစွမ်းထက်သောရွေးချယ်စရာလိုအပ်သည်။ ၂၊ ၃။ ဤဆော့ဖ်ဝဲဖြင့်သင်တုပနိုင်သောသင်ခလုတ်များစာရင်းဖြစ်သည် -
Atari ST / STE / TT / စွန်ငှက်
Sega, Mega Drive ကို
စူပါ Nintendo ဖျော်ဖြေရေးစနစ်
Sega Mega Drive ကို / ကမ္ဘာ ဦး
Sega Mega-CD ကို
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်သတိပြုသင့်သည်မှာ RetroPie သည်ဤစီမံကိန်းနောက်ကွယ်ရှိ developer များစွာသောအသိုင်းအဝိုင်း၏ကျေးဇူးကြောင့်ယနေ့ဖြစ်သည်ကိုသတိပြုပါ မည်သည့်အပိုဆောင်းဆော့ဖ်ဝဲကို install လုပ်စရာမလိုဘဲ Controller များစွာနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။ Play Station3(သို့) Xbox 360 ကိုမည်သည့်ထိန်းချုပ်မှုကိုမဆိုသုံးနိုင်သည့်သဟဇာတဖြစ်သော Controller များဥပမာရှိသည်။
RetroPie ကိုသင်၏ Raspberry Pi တွင်တပ်ဆင်ခြင်း
Hardware တွေအားလုံးအဆင်သင့်လုပ်ပြီးပြီဆိုရင် RetroPie ကို Raspberry Pi မှာ install လုပ်ဖို့အချိန်တန်ပြီ။ ဤအချက်မှာကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်နိုင်သောလုံးဝကွဲပြားသောရွေးချယ်မှုနှစ်ခုရှိပြီးနောက်ဆုံးရလဒ်ကိုကျွန်ုပ်တို့တူညီကြသည်။
ပထမ ဦး စွာတတ်နိုင်သမျှ ပါဝင်သည့် Raspbian OS နှင့်အတူ RetroPie ပုံရိပ်ကို အသုံးပြု၍ emulator ကိုထည့်သွင်းပါ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဤအရာသည်အရိုးရှင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်ဟုထင်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်တို့သည်စီမံကိန်း၏ကိုယ်ပိုင်တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ RetroPie ၏ပုံရိပ်ကိုသာ download လုပ်ရန်လိုအပ်သည် အဆင်မပြေတာကဒီနည်းအားဖြင့်တပ်ဆင်မှုကကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနေတဲ့ microSD ကဒ်အကြောင်းအရာအားလုံးကိုဖျက်ပစ်လိမ့်မယ်။
တစ် ဦး ကဒုတိယ option ကိုဖြတ်သန်းသွားလိမ့်မယ် Raspbian တပ်ဆင်မှုအဟောင်း၏အားသာချက်ကိုယူပါ သင်၏ Raspberry Pi တွင်တပ်ဆင်ပြီးသားဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤပုံတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် RetroPie emulator ကိုသာ install ရမည်။ ဒီရိုးရှင်းတဲ့နည်းနဲ့ကိုယ့် disk သို့မဟုတ် microSD ကတ်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသောမည်သည့်ဖိုင်ကိုမှမဆုံးရှုံးပါ။
သင်သည်ဤပထမဆုံးရွေးချယ်မှုကိုရွေးချယ်ပြီးပါက RetroPie ပုံရိပ်ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်စီမံကိန်းစီမံကိန်း၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ရှိ download menu ကိုဝင်ရောက်ရမည်ဟုသင့်ကိုယ်သင်သာပြောပါ။ ၀ င်းဒိုးကိုဖွင့်ပြီးတာနဲ့ငါတို့ Raspberry Pi ၏ version ကိုရွေးပြီး download ကိုနှိပ်ပါ။ စီမံကိန်းသည်အလွန်လေးလံသောကြောင့်ဒီပုံကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်အချိန်ကြာမြင့်နိုင်သည်၊ အလတ်စားမြန်နှုန်းဆက်သွယ်မှုအတွက် ၅ မိနစ်ခန့်ကြာနိုင်သည်။
ဤအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် RetroPie ပုံရိပ်၏ပါဝင်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့၏ microSD ကဒ်သို့လွှဲပြောင်းပေးရမည်။ ဒီအဘို့, ဒီလုပ်ဆောင်ချက်ကိုလုပ်ဆောင်ပါ Etcher ဆော့ဗ်ဝဲကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျအသုံးပြုသည်။ command line သုံး၍ ကဒ်ထဲသို့ပုံထည့်ခြင်းထက်ပိုလွယ်သည် အကယ်၍ သင်သည်အဆင့်မြင့်သောအသုံးပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်ရွေးချယ်မှုနှစ်ခုလုံးကိုသင်ကောင်းစွာထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ဤဖြစ်စဉ်တွင်တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်းမှာ ၁၀ မိနစ်ခန့်ကြာသည်။ ဤအဆင့်ပြီးဆုံးသွားသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏တပ်ဆင်မှုမှန်ကန်ကြောင်းကိုစစ်ဆေးရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ Raspberry Pi ကိုသာချိတ်ဆက်ရန်လိုသည်။
သင်၏ Raspberry Pi တွင် Raspbian ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ထားပြီးပါက၎င်းသည် RetroPie emulator ကိုသာတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်။ ဤသို့ပြုလုပ်ရန်ပထမ ဦး ဆုံးလုပ်ဆောင်ရန်မှာ git package ကိုတပ်ဆင်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤအထုပ်ကိုပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန်အားဖြင့်ထည့်သွင်းထားသည်။
Packages အားလုံးကို install လုပ်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့၏ Raspbian version တွင် emulator ကိုအမှန်တကယ် install လုပ်မည့်အောက်ပါ command များကိုကျွန်ုပ်တို့ရိုက်ထည့်ရမည်။
ကျနော်တို့နောက်ဆုံးညွှန်ကြားချက်ကို execute လုပ်တဲ့အခါပုံနဲ့ဆင်တူတဲ့ပုံကိုတွေ့ရမယ်။ ၎င်းတွင်သင်မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည်အခြေခံတပ်ဆင်မှုပြုလုပ်သည်ကိုသာဖော်ပြရန်လိုအပ်သည်။ ဤဖြစ်စဉ်သည်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာနိုင်ပါသည်။ တပ်ဆင်မှုပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုစနစ်ကိုပြန်လည်စတင်ရမည်
Raspberry Pi တွင် RetroPie ကို set up လုပ်ပါ
ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် emulator ကိုတပ်ဆင်ပြီးဖြစ်သည်။ နည်းလမ်းနှစ်မျိုးလုံးတွင်အသုံးပြုသူတစ် ဦး အနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံနှင့်ကစားနိုင်သည့်ထိန်းချုပ်မှုများကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေရန်အထောက်အကူပြုမည့်အချို့သောကိရိယာများကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရမည်။
ပထမဆုံးပြင်ဆင်ရမည့်ကိရိယာမှာ Samba ဖြစ်သည်။ ဤဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်ဂိမ်းများကိုပေါင်းထည့်ရန်အတွက်အခြားကွန်ပျူတာမှကျွန်ုပ်တို့၏ Raspberry Pi ကိုဆက်သွယ်ခွင့်ပေးလိမ့်မည်။ ဤလုပ်ငန်းကိုထမ်းဆောင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် RetroPie Setup ကိုသာရယူရမည်ဖြစ်သည်။ နောက် window တွင် Configure Samba ROM Shares ကိုနှိပ်ပါ
ဒီဖြစ်စဉ်ဟာမိနစ်အနည်းငယ်ကြာနိုင်ပါတယ်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့ Raspberry Pi ကိုတူညီသောကွန်ယက်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောမည်သည့်ကွန်ပျူတာမှမဆိုရယူနိုင်သည်။ ၎င်းအတွက်လိပ်စာဘားတန်းရှိမည်သည့်ဖိုင်တွဲတွင်မဆိုကျွန်ုပ်တို့သိလျှင် Raspberry Pi ၏ IP ကိုရေးသည်။ // RASPBERRYPI ။
ယခုအချိန်တွင်နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘုတ်ပေါ်တွင် RetroPie emulator ကိုပြုပြင်ထားပြီးအရေးကြီးဆုံးမှာအခြား PC မှ၎င်းကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ အခု ငါတို့လုပ်သမျှအားလုံးဟာငါတို့တပ်ဆင်ချင်သောဂိမ်းကို download လုပ်နိုင်သောအွန်လိုင်းစာမျက်နှာတစ်ခုဖြစ်သည်.
ငါတို့မှာဂိမ်း console တစ်ခုအတွက်တပ်ဆင်ချင်တဲ့ဂိမ်းတွေရှိရင် ကျွန်ုပ်တို့သည် Samba မှတဆင့်ဂိမ်းကစားခြင်းဂိမ်းထဲသို့ထည့်ပြီးဂိမ်းထည့်သည်။ ဂိမ်းကိုသက်ဆိုင်ရာဖိုင်တွဲထဲထည့်ပြီးတာနဲ့ငါတို့ Raspberry Pi ကိုပြန်ဖွင့်ပြီးအဲဒါကို detect လုပ်နိုင်အောင်ကစားနိုင်ပြီ။
နောက်ဆုံးအသေးစိတ်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာနောက်ဆုံးလုံခြုံရေး Retro နောက်ဆုံးဗားရှင်းတစ်ခုကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင် operating system မှာ console အတွက်လိုအပ်တဲ့ driver တွေပါဝင်နေလို့သူတို့ကို detect လုပ်ဖို့ control တွေကို install လုပ်စရာမလိုပါဘူး။ သူတို့နဲ့သာဆက်သွယ်ပြီးဘုတ်ကို reboot လုပ်ရမယ်။ စိတ်ထဲမှာထားရမယ့်နောက်အချက်တစ်ခု၊ တကယ်လို့များငါတို့ကပိုပြီးအရည်အချင်းပြည့်ဝတဲ့နည်းနဲ့ကစားချင်ရင် Motherboard overclocking ကိုဖြတ်ကျော်ကြည့်ပါ။ ၎င်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည် raspi-config menu ကိုဝင်ပါ။ ဤပြင်ဆင်မှုကိုပြုလုပ်ရန်လုံးဝမလုပ်နိုင်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည် Terminal တွင်ရေးသားရမည်။
ဤအမိန့်ကိုပြီးပြီဆိုလျှင်ရွေးစရာကိုကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်လိမ့်မည်။မြန်နှုန်းမြင့်အောင်လုပ်ခြင်း'နှင့်ဤအသစ်တစ်ခုအတွက် option ကိုအလယ်အလတ် 900 MHz.
ငါပြောခဲ့သလိုပဲ၊ ဒီနောက်ဆုံးဖွဲ့စည်းမှုဟာလုံးဝရွေးချယ်လို့မရဘူး၊ သင်က interface ကိုပိုပြီးအရည်အချင်းရှိစေသကဲ့သို့၊ အကောင့်အတော်များများကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်။ \_ t ပရိုဆက်ဆာကိုအတင်းတွန်းအားပေးနေတဲ့အချိန်မှာပိုပူလာလိမ့်မယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပန်ကာတစ်ခု၏အပူချိန်ကိုလျှော့ချနိုင်သည့်အပူနစ်များကိုမသုံးလျှင်၎င်းသည်အရည်ပျော်သွားစေနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ » Raspberry Pi » Raspberry Pi ဖြင့်သင့်ကိုယ်ပိုင် Arcade စက်ကိုဖန်တီးပါ